Ungayakha kanjani futhi uyihlobise itafula lomshado elimnandi | Hlobisa
Ungayakha kanjani futhi uyihlobise itafula lomshado elimnandi
USusy fontenla | | Izithako, Hlobisa
I-Las amatafula amnandi baba isesekeli semfashini sanoma yiliphi iqembu. Kusivumela ukuthi sinikeze amaswidi amnandi kuzivakashi zethu ukuze zikwazi ukujabulela ngokukhululekile i-buffet nayo enomhlobiso omuhle futhi omnandi. Namuhla singabona amatafula amnandi ngezinsuku zokuzalwa, izihlambi zezingane nazo zonke izinhlobo zemikhosi, kepha namuhla sizokhuluma ngendlela yokwakha itafula lomshado elimnandi.
Emishadweni kukhona nendawo yetafula elimnandi kakhulu ongaya kulo ngemuva kokuphathwa. Kula mathebula amnandi kwenziwa umhlobiso omuhle ohlangana ne isitayela somshado, kungaba ukuvuna, okwanamuhla noma okudala. Kunezindlela eziningi zokwenza futhi kulokhu sizokunikeza imihlahlandlela ethile kanye nogqozi oluncane.
1 Imibala etafuleni elimnandi
2 Indawo yetafula elimnandi
3 Ungali-oda kanjani itafula elimnandi
4 Izesekeli zetafula elimnandi
5 Itafula elimnandi levintage
6 Itafula elimnandi ngokwezifiso
7 Itafula lomshado omnandi ebusuku
Imibala etafuleni elimnandi
Enye yezinto ebaluleke kakhulu etafuleni elimnandi yilezi imibala esizoyikhetha, ngoba konke kufanele kuhlanganiswe kahle. Emshadweni, umhlophe uhlala eyi-protagonist, ngakho-ke kuvame ukukhethwa ama-shades angabonakali kakhulu, ebangeni le-pastel. Amaphinki athambile ne-blues ukunikeza ukuthinta kombala, kepha kugwema imibala ekhanyayo kakhulu. Kokubili ekuhlobiseni nakuma-dessert, kungcono ukubhekisa kule mibala ukudala itafula elihambisana nomshado nalolo thinta lothando.
Indawo yetafula elimnandi
Indawo lapho sizobeka khona itafula elimnandi kumele ibe kuyabonakala futhi kuyatholakala. Ukwenza zonke izakhi zigqame, kungcono ukuthi sibe nodonga ngemuva kwalo, ukuze sikwazi ukuhlobisa ingemuva ngemininingwane ethile, njenge-garland noma izimbali. Uma abantu bekwazi ukusizungeza, kuzofanele sihlele izinto ngaphezulu kwaso ngenye indlela, sisuka enkabeni siye ngaphandle. Njalo kufanele ucabangele i-engeli esizobona itafula kuyo ukudala umhlobiso walo. Kweminye imishado, itafula elimnandi libekwa endaweni engaphandle, engadini, yize konke kuncike esikhaleni esinaso nalapho siqhuba khona umshado.
Ungali-oda kanjani itafula elimnandi
Lapho sihlela amaswidi, kufanele ukubeka konke kahle kakhulu ngoba itafula elimnandi lingena ngamehlo. Imibala nokuhleleka kwendaba ukuze itafula lihle. Kwesinye isikhathi benza amazinga ahlukene etafuleni ukugqamisa, isibonelo, ikhekhe eliyinhloko noma indawo yeziphuzo ezimnandi. Kumele futhi sihlele konke ngokulandelana, sisebenzisa konke kusuka ezitsheni zengilazi kuya kumabhasikidi nakho konke okuwusizo kithi. Ukubekwa kufanele kuphelele futhi kuqaphele ukuze itafula elimnandi lihle.
Izesekeli zetafula elimnandi
Izesekeli zibaluleke kakhulu etafuleni elimnandi, ngoba yizo ezizonikeza konke ukuthinta okuhle. Amaswidi angahlelwa ngezindlela eziningi, kepha kulezi zinsuku kufanele unakekele ukwethulwa kwawo futhi akukho okungcono kunezesekeli ezincane ukusisiza. I- izimbiza zengilazi namabhodlela ngokubukeka kokuvuna sekubalulekile. Ezitolo singathola namabhokisi amakhadibhodi ukuhlanganisa bese sibeka amaswidi amaningi, kanye nezitroyi, amanabukeni noma amapuleti afanayo. Konke kufanele kuhlanganiswe kahle ngokwamathoni ukuze itafula libukeke lihle. Kukhona nemishini yokuhambisa ulamula kanye nezinye izesekeli ezingabukeka zipholile. Ukuthinta kumnandi singangeza ibhakede likapapa noma umthombo wamashokolethi.
Endaweni ezungeze itafula singabamba imihlobiso emihle yezimbali, ngamabhokisi enziwe ngokhuni, amakheji abukeka ngothando, amabhaluni namalambu futhi enza umhlobiso okhethekile womcimbi. Lezi zinto zizosisiza ukuthi sinikeze konke ukubukeka komkhosi.
Itafula elimnandi levintage
I-Las imishado enomoya wokuvuna Ziyimfashini kakhulu. Ngakho-ke singakha itafula elimnandi ngalesi sitayela. Amabhokisi enziwe ngokhuni, izinto ezindala esizitholayo, izimbiza zengilazi namabhodlela engilazi anezitishi zokuphuza eminye imibono. Singasebenzisa futhi indwangu ye-burlap exutshwe ngentambo emhlophe ukuyinika ukuthinta okwe-rustic nokuthandana ngasikhathi sinye.
Itafula elimnandi ngokwezifiso
Emishadweni ngokuvamile ngezifiso amatafula amnandi ukuba nenkumbulo enhle yalolu suku. Ukusebenzisa iziqalo zikamakoti nomkhwenyana ukufaka izinhlamvu ezikhanyayo kungumbono omuhle, osetshenziswa kabanzi, kepha ungasebenzisa futhi umqhele wezimbali owenzelwe wena ukuhlobisa itafula. Lokhu kuzoyinika ukuthinta okukhethekile, ngoba kuzoba ithebula elimnandi eliyingqayizivele.
Itafula lomshado omnandi ebusuku
Uma kufanele senze itafula elimnandi kepha futhi kufanele sikwenzele umshado wantambama ophenduka ubusuku, kuzofanele sikhathazeke ngokukhanyisa kwawo, nokungezinye zezinto okufanele sizengeze. Kubalulekile ukusebenzisa amalambu e-LED, ngoba awaniki ukushisa futhi ngeke onakalise amaswidi. I- imigexo yezimbali yamalambu yizona ezifanele kakhulu, ngoba zinikeza ukukhanya okukhanyayo nokuthinta kothando etafuleni. Singasebenzisa futhi izibani ezihlekisayo noma amakheji lapho sibeka khona amakhandlela ukuze sithinte ngokukhethekile imvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Hlobisa » Ungayakha kanjani futhi uyihlobise itafula lomshado elimnandi
Izinzuzo zokuba nengadi ebheke phezulu